> Resource> Video> TP cutter: Olee otú Bee TP Files na-enweghị omume rụrụ arụ Ogo
TP faịlụ na-emekarị kere si E site a dakọtara TV tuner kaadị si TV isi mmalite dị ka analọg ma ọ bụ dijitalụ USB, satellite, ma ọ bụ na poolu. Nke a faịlụ Ọkpụkpọ dị elu na foto àgwà na sụgharịa nnọọ nnukwu faịlụ nha. Ị pụrụ ịhụ na a nkeji ole na ole nke video nwere ike-abata ọtụtụ narị megabytes ma ọ bụ ọbụna ihe karịrị 1GB. Bulite ndị a na fim online nwere ike iri awa n'ihu, na ndị a nnukwu TP filse ga-ukwuu nke gị ohere nchekwa. N'ihi ya, ọ bụ a nkịtị mkpa bee ha mkpumkpu, ma ọ bụ mpikota onu ha nta. Na a na nkuzi, ị ga-amụta otú bee TP faịlụ effortlessly na Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) (Filmroa maka Mac (Si Wondershare Video Editor for Mac)).
1 Import TP faịlụ
Mgbe wụnye a TP cutter, na-agba ya. Na mmemme window, biko pịa "Import" Ibu Ibu gị TP videos. All kwukwara TP videos ga-egosi dị ka thumbnails na onye ọrụ Album. Mgbe ahụ, ikpuru na dobe gị TP faịlụ kpọmkwem n'ime video usoro iheomume.
2 Cut TP videos
Ị nwere ike iji nke a ọkachamara video cutter software bee n'ebe ọ bụla nke gị na TP video. Nnọọ na-eso n'okpuru nzọụkwụ.
Cut mmalite / ọgwụgwụ: akpa ịkpali red Time egosi n'ebe a na-na ị chọrọ bee, wee see Sissor icon kewaa ha abụọ akụkụ. Mgbe ahụ, dị nnọọ ihichapụ ihe ị na-adịghị mkpa.
Bee ọ bụla ọnọdụ n'etiti: Play video na nri ihuenyo, na mgbe ọ na-abịa nri mgbe, ịkwụsị ya. Ugbu a see Sissor icon gbawaa ya. Tinyegharịa a nzọụkwụ ọzọ na ọzọ ruo mgbe ị ahọtakwara niile enweghị isi akụkụ. N'ikpeazụ, wepu ya site ihichapụ.
Atụmatụ: N'ime usoro, ị pụrụ idozi nsogbu ma ọ bụ Redo ọ na-eji ngwá ọrụ ndị na toolbar conveniently.
3 mbupụ ọhụrụ TP faịlụ
Kụrụ Mepụta imeghe mmepụta window. Ebe a, ị nwere ike họrọ mbupụ gị ịkpụ TP faịlụ na niile ewu formats maka adaba playback na kọmputa gị na ngwaọrụ. Ọzọkwa, ị nwere ike ịkọrọ ya YouTube ma ọ bụ Facebook, na ọkụ ha na-DVD n'ihi na ogologo oge ichebe.
Atụmatụ: Ị nwere ike gụkwuo igbutu TP file size site kpatụ paremeters dị ka bit ọnụego, etiti ọnụego, mkpebi, wdg ime ya, dị nnọọ pịa "Advanced Ntọala" ikpughe ntọala panel.
Lelee n'okpuru video nkuzi na otú bee TP faịlụ kwụpụ site nzọụkwụ:
Olee otú Mepụta a Meme